रिचर्ड लेभीले गरे छक्का ! को वर्षा – WicketNepal
रिचर्ड लेभीले गरे छक्का ! को वर्षा
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ मंसिर २४, सोमबार १३:५३
विकेनेपाल, मङ्सिर-२४ , सोमबार
पोखरा राइनोजको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उनले आइतबार सम्पन्न खेलमा भैरहवा ग्ल्याडीएटर्स बिरुद्ध ७९ रनको विस्फोटक इनिंग खेलेका थिए जुन क्रममा ७ छक्का र ७ वटै चौका प्रहार गरेका थिए। लेभीको उक्त इनिंगको बाबजुत पोखरालाई भैरहवाले ४ विकेटले पराजित गरेको थियो।
Richard Levi ( File Photo )
इपिएल खेल्ने सबैभन्दा ठूलो नामका रुपमा हेरिएका दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर रिचर्ड लेभी टि-२० क्रिकेटमा बिष्फोटक ब्याटिंगका लागि चिनिने गर्छन्। ३१ बर्षीय लेभीले सन् २०१२ मा न्युजील्याण्ड बिरुद्ध मात्र ४५ बलमा शतक बनाउंदै टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो शतक बनाउने रेकर्ड आफ्नो नाम गरेका थिए। सो रेकर्ड पछि गएर दक्षिण अफ्रिकाकै डेभिड मिलरले तोड्न पुगे। लेभीले सोहि इनिंगकै क्रममा १३ छक्का प्रहार गरेका थिए जुन सो समयमा एकै टि-२० इनिंगमा ब्याट्सम्यानले प्रहार गरेको सर्वाधिक छक्का समेत थियो।
बिष्फोटक ब्याटिंगका लागि चिनिने लेभीको इनिंगपछि इन्डियन प्रिमियर लिगको टोलि मुम्बई इन्डीयन्सले ४ लाख डलरमा उनलाई टोलीमा समेत लिएको थियो। आइपिएलमा मात्र ६ खेल खेल्ने मौका पाएका लेभीले कुल ८३ रन मात्र बनाउन सके।